Museum elikhulu imithi eMoscow eYekaterinburg
Umuntu ngamunye, azisetshenziswa nabezokwelapha, kuba ukwazi ukuthola ukuthi yini amathuluzi ongaqondakali futhi scary afihliwe ngaphansi Ishidi avale oyinyumba kuhlinzwa noma kwenzekani egumbini yokusebenza ngaphansi kokufiphala kwezibani. Museum of Medicine kancane wembula imfihlakalo, kodwa ziphephile main bebonisa ngezinga elithile enkulu emlandweni wezokwelapha, ipumelelo odokotela enkulu, imisebenzi yabo, futhi izincwadi, izithombe kanye ekumeni, imiklomelo.
Kuze kube manje, i-Russia e iliphi idolobha, akukho Museum of imithi njengoba yisikhungo esizimele. Bonke bangabangasokile izikhungo aphelele emanyuvesi, academy, imiphakathi kwezempilo nezesayensi noma izibhedlela. Abadali futhi abagcina, kanye nabaqondisi okubhalwe ngenhla udondolo izikhungo, odokotela ie, abahlengikazi, abacwaningi.
Ngena iminyuziyamu kakhulu ekwelapheni akunakwenzeka, udinga ukuya ekuphathweni kanye nesivumelwano kwangaphambilini nge sorudnikami ukuqhuba isibonisi uhambo. Ngokuvamile izivakashi Museum kuyinto zendawo ngokuvakashela abafundi yezokwelapha, odokotela amadolobha Russian kanye nozakwabo bakwamanye amazwe.
Medicine Museum e-Russia: umlando ekudalweni
Protomuzeynye iqoqo kakade wabonakala ngasekupheleni kwekhulu XVII, ikakhulukazi zezindela, lapho-Sisters of Mercy waphulukisa hhayi kuphela umphefumulo kuphela, kodwa umzimba, kanye Pharmacy.
Umsunguli Museum of Medicine nguPetru mina, abamizamo uvumile Kunstkamera abadumile 1719 futhi usasebenza Petersburg. Mhlawumbe lokhu kwenzeka lapho umbusi oye waphayona ukudalwa izikhungo yalolu hlobo. Ngokuvamile, abadali iminyuziyamu yezokwelapha - amalungu omphakathi wezesayensi, abacwaningi kanye nodokotela. Kunstkamera - lokhu ingenye iminyuziyamu ambalwa imithi, abangakwazi hit ubani.
Ekupheleni kwekhulu XIX ke wavulwa iminyuziyamu eziningana eminyangweni of emayunivesithi yezokwelapha :. Memory Museum Pirogov Museum of umphakathi Russian Isitoreji kazwelonke wezempilo, njll Ekuqaleni kwekhulu XX e neminyaka uhulumeni wamaSoviet owasabela isiqale eMoscow Museum of Social Ukuhlanzeka. Indawo egcina amagugu esizwe nemibukiso imithi eMoscow nakwamanye amadolobha (Kiev, Petersburg, eYekaterinburg, Kazan, Novorossisk), zazisuka zomlando esikhumbuzo umkhakha. Ngokwesibonelo, amazinyo, noma ukuhlinzwa Museum.
Museum elikhulu imithi eRussia
Museum of Applied Medicine e Moscow, kwaba nguwo Eyokuqala yalezi iminyuziyamu hhayi kuphela e-Russia kodwa emazweni aseNtshonalanga. It yadalwa beqondiswa UProfesa Saveliev ngo-1913.
Iqoqo elikhulu kunawo wonke zobuciko ungaphakathi Museum of emlandweni wezokwelapha kwelinye izikhungo endala zemfundo - University. Sechenov, esemgwaqweni e Moscow, eduze esiteshini Isiteshi sesitimela "Frunzenskaya". Kunezinto eziningi ziphephile enikelwe imithi ensimini lempi, 1941-1945., Ibonisa "ukuziphendukela kwemvelo" Amathuluzi okuhlinza ngokhuni iphosilini ukuze wesimanje. Kukhona inani elikhulu tibonwa, izinto futhi ngokuwina omkhulu odokotela Russian (Sechenov, Pirogov, Pavlov futhi obani ababenomthwalo ngisho umsebenzi wezokwelapha emfushane laseChekhov).
Museum of Forensic Medicine Mechnikov Petersburg iye njalo wavusa isithakazelo esikhulu, hhayi nje ukuba abafundi ezikhungweni zezempilo, kodwa futhi abantu bezinye ukuzibonakalisa. Kuze kube 2000, kwakunebandla elilodwa nje isihlalo nge tibonwa kubafundi 6th ngonyaka ukutadisha forensics. Khona-ke ukuphathwa inyuvesi ukuvula emnyuziyamu elingase savakashela namanye amaqembu izivakashi ihlelwe aphoyintimenti. Of izingcezu okubi kakhulu bekhunjulwa kakhulu intombazane mummy ngubani walengiswa iyasuka kwezinye ehlathini, mummy womuntu wahlushwa utshwala, behlezi etafuleni, ezihlukahlukene skull ukuhlukumezeka, kwezitho zomzimba ogulayo, okuncane black uyabhema futhi kwezinso zentuthuko amabhange nge formalin.
Medicine Museum e Moscow
Enhloko-dolobha, mayelana 10 eminyuziyamu imithi enamathiselwe amakolishi, nezikhungo, amanyuvesi kanye nezibhedlela.
Medical History Museum of Moscow State Medical Dental University yasungulwa ngo-1926 futhi ikakhulu elalinikezelwe umkhakha iphrofayli. Kukhona Chic izihlalo zamazinyo ekwelapheni ezicukuthwaneni ezihloniphekayo, imishini yamazinyo, okuyinto iminyaka engaphezu kuka-100.
Museum of senhliziyo Ukuhlinzwa ngesikhathi Research Center. Bakuleva ubonisa valve ahlukahlukene inhliziyo, kukhona kabusha yokusebenza maphakathi XX leminyaka, amadivayisi kwegazi futhi izinzwa. Abasebenzi uchitha uhambo kakhulu ulwazi lokumelwa ongumuntu ohlelweni senhliziyo nemithambo yegazi.
Museum yezindaba zemihla Ukuhlinzwa okuthiwa. Vishnevsky ungathola Biography of the edumile udokotela ohlinzayo Pirogov, bheka izincwadi zakhe futhi kuzuzisa, kanye Atlas lokuqala kakhulu kwendawo ye komzimba womuntu lapho odokotela ayekile usebenza cishe "abayizimpumputhe, '" thinta ".
Medicine eYekaterinburg Museum
Sikhungo Collection wavulwa e-80s zakuqala. XX leminyaka ngesikhathi Sverdlovsk lesifunda esibhedlela emtholampilo №1 bese iqasha ezingaphezu kuka-70 000 ziphephile.
isitoreji amayunithi amaningi aphathelene imisebenzi odokotela abadumile Ural Schaeffer, Leeds futhi Kushelevsky: lapha izinto zabo futhi imiklomelo, amanothi zokupheka. Okunye ziphephile ezihlobene imithi yendabuko, kuhlanganise Muslim, kukhona nangezibonakhulu Antique, amasethi ophthalmologist, wamazinyo futhi udokotela wezifo zabesifazane. Museum ivuliwe yokuvuma mahhala bonke abanesithakazelo imithi. Ungakwazi ucingo ukuze kuthuthukiswe ukuphathwa futhi izinkambo waqondisa, okuyinto abasebenzi bayokujabulela ukukutshela ngalo izindaba ezijabulisayo futhi ulwazi ngebuthelelo labo.
Indima iminyuziyamu emphakathini imithi
Esikhathini Museum okuqala eyenzelwe abafundi abathola nabezokwelapha, noma esikoleni esiphakeme abafundi abafuna svyazyat ukuphila kwakhe imithi esikhathini esizayo. Ngokwesibonelo, cabanga ngomlando wezokwelapha Ekaterinburg Museum livulekele bonke abavakashi. Nokho, abasebenzi waveza ukuthi abantu abavamile ezinye ziphephile kubonakale scary, ngakho-ke Kwanele ukushaywa umoya Museum anelise ilukuluku. Abafundi ezikoleni zezokwelapha wavakashela kaningana embukisweni ukuze wandise izinzuzo umsebenzi wesikhathi esizayo.
Ngenxa ezifana nemibukiso indoda usiqonda ngokugcwele umsebenzi omkhulu bezempilo, okuyinto igcile elwatini ezinkulukazi nobuntu. Indawo egcina amagugu esizwe izinto Military Field Medicine ukukhombisa ukuthi kwakunzima kanjani ukuba odokotela nodade ukwenza imithi jikelele indawo engahlanzekile nezinsongo engapheli ukuhlasela isitha.
Imibukiso wezokwelapha forensic ukwenza abantu isikhathi esiningi sokucabanga ngendlela ukuphila kwabo, ukuba aphinde acabange salo sengqondo sokungafuni ukuba silungise imikhuba emibi, futhi ngiyabathanda zonke izinto ezinhle emhlabeni wethu.
Iziphathimandla zedolobha iziteshi Metro Saint-Petersburg ukwenza eduze
Lake Amut, eKhabarovsk Territory: incazelo, izivakashi kanye nokubuyekeza
Rate isaphulelo njengoba ukuhlaziywa ipharamitha bekuhlela utshalomali
Slanting square nge-oblique bangs. Izinhlobo zezinwele (isithombe)
"Dibikor": yokusetshenziswa, real analogue, izithombe